दशै‌को बेला छोरा जे’ल परेपछि, तना’बमा छन् शाहरुख ! - Thulo khabar
दशै‌को बेला छोरा जे’ल परेपछि, तना’बमा छन् शाहरुख !
काठमाडौ : आर्यन खान बलिउडका सबैभन्दा ठूला स्टार शाहरुख खानका जेठा छोरा हुन्। उनी बलिउड उद्योगको लोकप्रिय स्टार बच्चाहरु मा आउँछ। जे होस्, आर्यन खान लाइमलाइट मा रुचि राख्दैनन् र पापाराजी को लागी पोज गर्न मन पराउँदैनन्।
आर्यन कहिल्यै कुनै अवार्ड शो मा देखिएनन् र उनको सोशल मिडिया खाता पनि लामो समय को लागी निजी थियो। आर्यन खान को गिरफ्तारी पछि, पूजा भट्ट, रवीना टन्डन, राज बब्बर र अन्य बलिउड सेलिब्रेटीहरु उनको समर्थन मा बाहिर आए। तर शाहरुख खानको तर्फबाट अहिले सम्म यस बारेमा केहि भनिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा, सबैको दिमागमा प्रश्न यो छ कि शाहरुखको निवास (मन्नत) को बन्द ढोका पछाडि के हुँदैछ ? इन्डिया टुडेले शाहरुख खानको परिवारका एक नजिकका साथीसँग यसबारे कुरा गरे। स्रोतले भन्यो कि जब देखि आर्यन खानको बारेमा खबर आएको छ, शाहरुख खान र गौरी खान धेरै चिन्तामा छन् ।
स्रोतका अनुसार, उनीहरुलाई लाग्दैनथ्यो कि यो सब यति लामो समय सम्म चल्नेछ। जब आर्यनको गि’रफ्तारीको खबरले उद्योगलाई हल्लायो, ​​शाहरुखले तुरुन्तै फोन गरी यस विषयमा देशका सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञहरु संग कानूनी सल्लाह मागे। सतीश मन्सिन्डेलाई बोलाइएको थियो ।
उनले शाहरुखलाई आश्वासन दिएका थिए कि आर्यन चाँडै यस मु’द्दा बाट बाहिर आउनेछन्। तर, यो हुन सकेन। अदालतले आर्यनको जमानत निवेदन खारेज गरेपछि परिवारलाई ठूलो धक्का लागेको छ। गौरी खानका भाइ वि’क्रान्त छिब्बर र उनकी श्रीमती नमिताले यो कठिन समयमा उनलाई साथ दिइरहेका छन्।
स्रोतका अनुसार, आजकल शाहरुख खान सु’ति रहेका छन्। उनी के’स पछी समय बिताइरहेका छन् र छोरा आर्यनको स्वास्थ्यका बारेमा एनसीबीका अधिकारीहरुलाई सोधिरहेका छन् । स्रोतले भन्यो, गौरी र शाहरुख आफ्नो छोराको स्वास्थ्यको बारेमा सोधपुछ गर्न दिनभरि धेरै पटक फोन गर्छन्।
उनी आर्यन संग सीधा कुरा भने गर्दैनन् । तर यो संग सम्बन्धित जानकारी परिवार लाई दिईन्छ। आर्यनका लागि आफ्नो लुगा र घर पकाएको खाना दिन को लागी अनुरोध गरिएको थियो। शाहरुख खानले आफ्ना सबै प्रोजेक्ट स्थगित गरेका छन्। स्रोतका अनुसार शाहरुख आफ्नो छोरा आर्यन खान घर नफर्केसम्म कुनै बयान जारी गर्दैनन्।
परिवार अझै के गर्ने भनेर सोच्दै छ। आर्यनले आफ्नो थप जीवन अमेरिका वा बेलायतमा बिताउनेछन् वा उनी भारतमा बस्नेछन्, यो जे’लबाट बाहिर आएपछि विचार गरिनेछ। स्रोतले यो पनि भन्छ कि शाहरुखको परिवार कानूनी प्रणाली र प्रक्रियामा ढिलाइ भएको कुरासंग निराश छ।
एकै समयमा, अन्य अभिनेताहरु जो शाहरुख खान को समर्थनमा अगाडि आए, अब अन्य कलाकारहरुलाई यो भ’य पनि छ की अब फेरी उनकै पालो पो होकी ? आर्यनको पक्राउसंगै प्रमाणित गरेको छ कि यो कुनै कलाकारको छोरा वा छोरीलाई पनि हुन सक्छ।